Migadra Noho ny Finoany ny Vavolombelon’i Jehovah any Azerbaïdjan
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Yorobà Éwé
Voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenan’i Azerbaïdjan, fa mahazo mangataka hanao fanompoana sivily ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Mbola tsy namoaka lalàna mamaritra an’izany fanompoana sivily izany mihitsy anefa ny fitondrana any an-toerana. Miakatra fitsarana sy aiditra am-ponja foana àry ireo Vavolombelon’i Jehovah tsy manaiky hanao miaramila noho ny zavatra inoany.
Tsy manaja ny fifanekena nataony i Azerbaïdjan
Niditra ho mpikambana tao amin’ny Filan-kevitra Eoropeanina i Azerbaïdjan, tamin’ny 1996. Izao ny fifanekena tsy maintsy nataony tamin’izay: 1) Mamoaka lalàna momba ny fanompoana sivily ao anatin’ny roa taona, aorian’ny nidirany ho mpikambana. 2) Manafaka an’izay rehetra nogadraina satria tsy nanaiky hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. 3) Mamela ny olona hifidy hanao fanompoana sivily, raha tsy eken’ny eritreriny ny hanao miaramila. Mbola tsy misy vitan’i Azerbaïdjan anefa izany rehetra izany, na dia efa 13 taona mahery aza izy no mpikambana tao amin’ny Filan-kevitra Eoropeanina.
Nanao tatitra momba an’i Azerbaïdjan ny Vaomiera Eoropeanina Miady Amin’ny Fanavakavaham-bolon-koditra sy ny Didy Jadona, tamin’ny 2011. Hoy izy io: “Mandidy ny fitondram-panjakana any Azerbaïdjan ny Vaomiera Eoropeanina, mba hamoaka lalàna momba ny fanompoana sivily avy hatrany, araka ny fenitra arahin’i Eoropa. ... Averimberinay foana fa tsy tokony hampakatra fitsarana na hanagadra an’izay tsy mety manao miaramila ireo manam-pahefana any. Tokony havelany hanao ny adidiny eo amin’ny fiaraha-monina kosa izy ireo, araka izay amelan’ny feon’ny fieritreretany azy.”
Terena hanao miaramila sy gadraina tsy ara-drariny ireo tsy mety manao miaramila
Mbola tsy raharahain’ny fanjakana any Azerbaïdjan foana ny zon’ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nampanantsoina tany amin’ny Birao Miandraikitra ny Fiantsoana ho Miaramila i Kamran Shikhaliyev, tamin’ny 23 Aogositra 2013, mba hanao fizaham-pahasalamana. Vavolombelon’i Jehovah izy ary 17 taona. Nohazavain’Atoa Shikhaliyev tamin’io fotoana io, sy tamin’ny fotoana hafa niantsoana azy, fa tsy eken’ny eritreriny ny hanao miaramila ary mangataka ny hanao fanompoana sivily izy. Nataony an-tsoratra ilay fangatahana hanao fanompoana sivily, ary nateriny tany amin’ilay birao tamin’ny 8 Oktobra 2013. Noterena hanao miaramila Atoa Shikhaliyev, tamin’ny 10 Oktobra 2013, rehefa niverina tany amin’ilay birao. Nentina an-keriny tany amin’ny toby miaramila izy, ary notazonina tany.
Enim-bolana mahery no nitanana azy tsy ara-drariny toy izany, vao namoaka didy ny Fitsarana Miaramilan’i Jalilabad. Voasazy higadra herintaona any amin’ny fonja miaramila izy, tamin’ny 16 Aprily 2014, satria hoe miaramila nitsoaka an-daharana. Mbola tsy nanao miaramila mihitsy anefa Atoa Shikhaliyev, satria mbola tsy nanao fianianana sady mbola tsy nanao fanamiana. Tsy nandositra koa izy, satria tonga foana isaky ny nampanantsoina tany amin’ny Birao Miandraikitra ny Fiantsoana ho Miaramila. Nohazavainy tamin’ny olona tao fotsiny fa tsy mamela azy hitana basy ny feon’ny fieritreretany.
Nandefa fitarainana tany amin’ny Fitsarana Ambony any Shirvan, any Azerbaïdjan, Atoa Shikhaliyev, saingy nolavin’ilay fitsarana ny fangatahany, tamin’ny 16 Jolay 2014. Nafindra tany amin’ny fonja miaramila any Salyan, any Azerbaïdjan, izy tamin’ny Desambra 2014. Tsy fantatra mazava anefa raha efa nanomboka teo ilay saziny higadra herintaona na tsia. Manantena Atoa Shikhaliyev fa mba hihaino ny fitarainany ny Fitsarana Tampon’i Azerbaïdjan, ary hanaja ny zony tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Sokafy ity rohy eto ambany ity raha tianao ho hita ny lisitr’ireo Vavolombelon’i Jehovah migadra any Azerbaïdjan:
Gadraina Noho ny Finoany: Azerbaïdjan (PDF amin’ny teny anglisy)
Nafindra tany amin’ny fonja miaramila any Salyan, any Azerbaïdjan, i Kamran Shikhaliyev.
Nosamborina tsy ara-drariny i Kamran Shikhaliyev, ary mbola tsy nanomboka ilay saziny higadra herintaona.
16 Aprily 2014
Voasazy higadra herintaona any amin’ny fonja miaramila i Kamran Shikhaliyev, noho izy tsy mety manao miaramila.
Nanery an’i Kamran Shikhaliyev hanao miaramila ny tao amin’ny Birao Miandraikitra ny Fiantsoana ho Miaramila, ary nitondra azy an-keriny tany amin’ny toby miaramila.
12 Martsa 2013
Nomelohina higadra sivy volana i Kamran Mirzayev, izay Vavolombelon’i Jehovah, noho izy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nafahana anefa izy, na dia mbola tsy tapitra aza ny saziny, satria nisy famotsoran-keloka faobe.
25 Septambra 2012
Voasazy higadra herintaona i Fakhraddin Mirzayev, izay Vavolombelon’i Jehovah, noho izy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
8 Septambra 2010
Voasazy higadra sivy volana i Farid Mammadov, izay Vavolombelon’i Jehovah, noho izy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
19 Aogositra 2009
Nosamborina indray i Mushfig Mammedov noho izy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Efa notazonin’ny manam-pahefana izy talohan’ny nitsarana azy, ary nasaina nandoa lamandy rehefa voasazy fanindroany.
7 Martsa 2008
Nandefa fitarainana tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona ny mpisolovavan’i Mushfig Mammedov sy Samir Huseynov. Ampitovin’i Azerbaïdjan amin’ny mpanao heloka bevava mantsy ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
4 Oktobra 2007
Nomelohina higadra folo volana i Samir Huseynov, izay Vavolombelon’i Jehovah, noho izy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Notazonin’ny manam-pahefana i Mushfig Mammedov, izay Vavolombelon’i Jehovah, na dia mbola tsy voatsara aza. Nahazo sazy mihantona enim-bolana izy avy eo, noho izy tsy nety nanao miaramila.